माघ २८ गते दुई लाखभन्दा बढीको सहभागितामा काठमाडौंमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौं - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ बिचार ∕ माघ २८ गते दुई लाखभन्दा बढीको सहभागितामा काठमाडौंमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौं
माघ २८ गते दुई लाखभन्दा बढीको सहभागितामा काठमाडौंमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौं
झिल्को डटकम २०७७, माघ २१ गते ११:५५ मा प्रकाशित
सूर्यप्रकाश सुवेदी ‘पथिक’, सचिव, केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
विद्यमान राजनीतिक निकै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ । यस्तो अवस्था एकाएक किन आयो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणासँगै नेपाली राजनीति अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ, नेपाली समाज अँध्यारो सुरुङभित्र जबर्जस्ती प्रवेश गराइएको छ र त्यहाँबाट निकाल्दा सत्तरी वर्षदेखि अनवरत संघर्ष गरेर नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक, समावेशिता जस्ता केही उपलब्धि समाप्त पारी मुलुकलाई पुनः पुरानो एकात्मक हिन्दु पश्चगामी प्रणालीमा फर्काउने षडयन्त्र गरेका छन् । तसर्थ यो प्रष्ट रुपमा प्रतिगामी, प्रतिक्रान्ति, जनता र राष्ट्रविरोधी पश्चगमन नै हो ।
लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीभित्र अग्रगमन र यथास्थितिमै बस्नेमा प्रकारान्तरले बहस भइरहेको थियो । केपी ओली ०६२/०६३ ले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई स्वामित्व लिन हिच्किचाइरहेका थिए । आन्दोलनको जबर्जस्त राप र तापबाट उनी र उनको प्रवृति लुकेर, दबिएर बसेको थियो । जब आन्दोलनको राप र ताप घट्दै गएको उनीहरुले महसुस गरे अनि आफ्नो सक्कली अनुहार देखाए ।
हामीले महान जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट केपी ओली जस्ता मानिसहरू पनि रुपान्तरण भएका होलान् भन्ने ठानियो । अब मिलेर एउटै पार्टी निर्माण गरी समाजवादको यात्रामा लाग्ने महान् उद्देश्यसहित एकताबद्ध भएको तर केपी शर्मा ओलीमा समाजवादको कुरा त के एउटा सामान्य बुर्जुवा आदर्श पनि देखिएन ।
केपीमा धेरै नै समस्या देखिएको साँचो हो । यो समस्या धेरथोर अन्यमा पनि देखिएकै हो, हैन र ?
हो । यसबीच क्रान्तिकारी प्रवृतिबाट पनि थुप्रै कमीकमजोरी र सीमा देखिएका छन् । केपी ओलीको प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका बिरुद्ध जीवन मरणको संघर्षमा होमिएको पार्टी र यसका नेता, कार्यकर्ताका लागि आफ्नै कमीकमजोरी बारेमा निर्मम समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय यो नहोला । तर, जति सक्यो छिट्टै गल्ती, कमी कमजोरीका बारेमा सार्वजनिक आत्मआलोचना र भावी दिनमा आफ्नो तर्फबाट गर्ने र नगर्ने कामहरूका बारेमा जनसमुदायमा प्रष्ट शब्दमा राख्नु अनिवार्य देखिन्छ ।
फेरि पनि मूल कुरा वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाकै हो । जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काईसौं शताब्दीमा जनवादको विकास र माओवादलाई स्थगित गरी जनताको जनवादलाई अन्तरिम कार्यदिशा निर्माण गरियो, यसलाई थप प्रस्ट पार्ने र विकास गर्ने मूल काम नै बैचारिक राजनीतिक कामको केन्द्रमा रहेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई धाराको ऐतिहासिक भौतिकवादी समीक्षा र संश्लेषण गर्दै एक रूप बुझाइमा पु¥याउने अर्को जिम्मेवारी देखिन्छ । नेपालीपनको समाजवादको मोडल के कस्तो हुन्छ यसको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा अविभाज्य इकाइका रूपमा गरिनुपर्ने व्याख्या देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट समाजवादको यात्राको प्रक्रिया के कसरी हो त्यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मार्गचित्र निर्माण गर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सरकारलाई आगामी दिनमा उपयोग गर्दा जनताले प्रष्ट रुपमा देखिने कामहरु बुँदागतरुपमा दिन जरुरी छ । कम्तिमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रमा तत्काल जनताले पाउने गरी कामहरु गर्ने ठोस मार्गचित्र देखाउन जरुरी छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थिरता र समृद्धिका लागि दिएको मत केपीले अपहरण गरेका छन् । फेरि कम्युनिस्टको पक्षमा जनतालाई फर्काउन सकिएला ?
अझै जनता निराश भएका छैनन् । निश्चित रुपमा जनताका प्रश्न, आशंका, सुझाव, आलोचना आन्दोलनकरीलाई र हाम्रो पार्टीलाई छ तर मुख्य रुपमा केपी ओलीको प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिविरुद्ध आक्रोस, घृणा सडकमा व्यापकरुपमा पोखिएको छ्र । हामीले अहिले नसोचेको उपस्थिति देखाएर नेपाली जनताले आफ्नो पक्षधरता प्रष्ट देखाएका छन् ।
यो आन्दोलन कहिलेसम्म ?
प्रतिगमन नसचिएसम्म यो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ ।
आन्दोलनको थप कार्यक्रम के छ ?
हामी माघ २८ गते दुई लाखभन्दा बढीको सहभागितामा काठमाडौंमा विशाल विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौं । यसलाई सफल पार्न माघ २२ गते २० हजार युवाहरुको अनुशासित मार्चपास र माघ २७ गते दशौँ हजारको मोटरसाइकल ¥याली काठमाडौंमा गरिदैंछ । देशभर विविध प्रकारका प्रदर्शन र विरोध निरन्तर चलिरहन्छ्र । माघ २८ गतेपछि व्यापक समीक्षासहित नयाँ चरणको आन्दोलनको घोषणा हुनेछ ।
तपाईं त गृहमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार भएर गृहमन्त्रालयमा बस्नुभयो । गृहमन्त्री बादल किन केपीको प्रतिगमनको मतियार बनेको होला ?
कमरेड रामबहादुर थापा ‘बादल’ केपी ओलीको प्रतिगमनकारी/प्रतिक्रान्तिकारी वैचारिक राजनीतिक लाइनमा समावेश भएर इतिहासमा अक्षम्य गल्ती गर्नुभएको छ । उहाँ ढिलोचाँडो त्यो दलदलबाट निस्केर आउनुहुनेछ । उहाँको इतिहास, सोंचाइ र प्रवृतिले उहाँलाई त्यहाँ बस्न दिँदैन र अन्तत सक्नुहुन्न पनि । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
आफ्नो संस्कार भुल्दै कांग्रेसी नेता
पत्रकार महासंघमा जस्तै ओली इतरका राजनीतिक शक्तिहरुको एकताको विकल्प छैन
पत्रकारको चुनावले राजनीतिमा देखाएको संकेत
ओलीको हावादारी योजना बजेटमा पर्न हुन्न